သင်မသိသေးတဲ့ Apple ရဲ့ဖခင်ကြီး Steve Jobs တီထွင်ခဲ့တဲ့ i ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် – Sunthit Myanmar
သင်မသိသေးတဲ့ Apple ရဲ့ဖခင်ကြီး Steve Jobs တီထွင်ခဲ့တဲ့ i ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
Apple ရဲ့ “i” အကြောင်းလေးကို ဟိုး အင်တာနက်ကိုကြားဖူးပြီး သုံးတတ်ခါစကတည်းက ရှာဖွေမိ၊ စဉ်းစားမိဖူးပါတယ်။ ဘာလဲဟ“i” ပေါ့။ iPhone ဆိုတော့ ငါ့ဖုန်းပေါ့။ iPod ဆိုတော့ ငါ့ပေါ့ ပေါ့။ iPad ဆိုတော့ ငါ့(အသံမထွက်ရဲတော့ဘူးဗျ)ပေါ့။ သူကလည်းမပြီးသေးပါဘူး။ Operating System (OS) နဲ့ကျတော့လည်း တွဲတော့ iOS တဲ့။ အိုး . . . ISO (International Organization for Standardization) ကတော့ ဟိုဟာ Standard သတ်မှတ် ဒီဟာ Standard သတ်မှတ်နဲ့ 23 February 1947 ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်လာပြီး ကြိုရှုပ်ထားသေးပါတယ်။
Steve Jobs (1955-2011) ရဲ့ “i” နှင့် “i”ဘဝအစ “i”
ကျနော်တို့ တွေ့မြင်နေကျ နည်းပညာနယ်ပယ်၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ “i” ရဲ့မူလအရင်းအမြစ်ကတော့ နည်းပညာဖခင်ကြီး Steve Jobs ရဲ့ ဘဝစခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောချင်လို့ပါ။
“i” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Apple ကစတင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့အချိန် Steve Jobs စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်ပါမယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၇ ရက်နေ့က သူရဲ့ Macintosh ကွန်ပျူတာ နေဝင်ချိန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် နောက်ထပ်ထုတ်မည့် ကွန်ပျူတာကို မိတ်ဆက်ရာမှာ သုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ iMac ကွန်ပျူတာပါပဲ။ ထိုအချိန်မှာ သူရဲ့ “i” ဆိုတဲ့အသုံးကို တစ်ခါတည်း ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီမီးနင်းလေးတွေကို အားလုံးသိနိုင်ပါတယ်။ Steve Jobs တွေးခေါ်ယူဆမှုဖြင့် ဒီ “i” လေးတွေက ဘယ်လောက် ကြီးကျယ် နေမလဲမသိ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူများ ကိုယ်ကွန့်မြူးတတ်သလိုသာ ဘာသာပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အင်မတန်လှပသေသပ်လှတဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ စတင်လိုက်တဲ့ “i” ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ Steve Jobs အနေနဲ့ iMac ကိုအချိန်ကိုက် ကွက်တိ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် iMac လေးနဲ့ စမတ်ကျကျ အင်တာနက်သုံးရတဲ့ အရသာကို အသုံးပြုသူများရဲ့ လက်ဝယ်ကို ပို့ပေးနိုင်တယ်လို့ဘဲ ပြောရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် တောက်ပတဲ့ “i” တစ်လုံးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ထို iMac ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ ကွန်ပျူတာရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အဘိဓာန်တစ်ရပ် ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့တဲ့ Steve Jobs ရဲ့ အတွေးနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုပါပဲ။ ဒါတွေကြောင့်လည်း သူ မတောင်းဘဲ ရလိုက်ရတဲ့ နည်းပညာ လောကရဲ့ ဖခင်ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုကို ရရှိသွားတာပေါ့ဗျာ။
Steve Jobs ရဲ့ ပိုမိုချယ်သလိုက်တဲ့ “i”
iMac ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဂျူလှိုင်လ မှာ iBook ဆိုတဲ့ ယနေ့ခေတ် သွားလေရာမှာ အလွယ်တကူ ယူဆောင်နိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ အစကို “i”နှင့်ပဲ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီနေ့ခေတ် မှာတော့ Laptop လို့လူသိများတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေပေါ့ဗျာ။ သူရဲ့ တောက်တောက်ပပ ချယ်သလိုက်တဲ့ “i” ထုတ်ကုန်တွေကတော့ အောက်မှာ ပြထားသည့်အတိုင်းပါပဲဗျာ။
May 7, 1997 = iMac
July of 1999 = iBook
January 5, 2000 = iTools , iCards and iDisk
January 9, 2001 = iTunes and iDVD
October 23, 2001 = iPod.
August 24, 2002 = iPhoto and iChat
January, 2004 = iLife
January 10 2006 = iWeb
June 29, 2007 = iPhone (iChat Mobile)
April 3, 2010 = iPad
November 2012 = iPad Mini
September 1, 2010 = iTV
April 10, 2015 = iWatch
iOS ဆိုတဲ့ Mobile Operating System ကို iPhone, iPad, and iPod touch တွင်အသုံးပြုရန် Apple Inc မှ ဖန်တီး တီထွင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး June 2010 မှာ Steve Jobs ဟာ iPhone OS ကို “iOS” ဟု သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ iOS လို့ အမည်သတ်မှတ်ဖို့အတွက် Steve Jobs တစ်ယောက်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့သေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ IOS လို့အမည်ရတဲ့ ထုတ်ကုန်ကို Cisco က 2000 ခုနှစ်လောက်ကတည်း သူ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ Routers တွေရဲ့ OS တွေရဲ့အမည်အနေနဲ့ သုံးထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ Steve Jobs ဟာ iOS ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုအသုံးပြုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် Cisco ရဲ့ Routers OS ဖြစ်တဲ့ IOS ဆိုတဲ့အမည်ကို Cisco ဆီကနေ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ တရားဝင် အမည်ကို လိုင်စင်အနေနဲ့ ပြန်လည် ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် Steve Jobs ရဲ့ “i” မက်မောမှုနှင့် ကျနော်တို့ သိရှိထားတဲ့ Apple ရဲ့ “i”စကားလုံးလေးတွေကို နားလည်မိလောက်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။
Published December 19, 2016 By staff
Categorized as Inspiration, Knowledge Tagged apple, inspiration, knowledge, steve jobs
အားရပါးရလက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခြင်းက အသက်ရှည် ကျန်းမာစေကြောင်း တွေ့ရှိ
တူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရ